Rosia: Ny Fomba Fandraisana ireo Zeorziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 16:34 GMT
Nanaraka ny fandrakofana ilay fanenjehana ireo Zeorziana tao Rosia ny bilaogera Sukhumi (eto sy eto ireo lahatsoratry ny Global Voices teo aloha). Manoratra izy (RUS):
Nahita fihetsiketsehana iray tany St. Petersburg manohitra ny fanenjehana ireo Zeorziana aho tao amin'ilay fantson'ny fahitalavitra ”Imedi”. Tamin-kafaliana no nahitako ny namako Valiko tao. Mankasitraka aho, satria tsy natahotra ny mety ho vokany izy, fa nidina an-dalambe ary nijoro amin'ny maha olompirenena azy. Amin'ny fotoana toa izao no ahafantaranao hoe iza no tena olona, ary iza no akora poakaty fotsiny.
Kanefa ratsy avokoa ny ankamaroan'ireo vaovao. Toa lasa mivadika resa-pôlitika hatramin'ny fanatanjahantena koa. Azon'i Anna Chakvetadze ao amin'ny foko Zeorziana ny ‘Tompondakan'i Kremlin’ amin'ny fifaninanana tennis, hoy ny voasoratr'i Sukhumi – manoloanà vahoaka mihiaka eso hoe ”Mandehàna any Zeorzia ry Zeorziana!” (Fanitsiana: Irina, anatin'ity fanehoankevitra eto ambany ity, dia milaza fa tsy izay no niseho.) Ary nisy Zeorziana mpanao fanatanjahantena iray hafa nandositra an'i Rosia:
Niverina tany Tbilisi omaly i Elena Gedevanishvili. Zeorziana mpikorisa an-dranomandry nofanina tany Moskoa izy, izay nahazo ny toerana fahenina tamin'ny Lalao Olaimpikan-Dririnina. Nalefa tany Rosia tanatin'ny fiaramanidina voalohany ny ray aman-dreniny; I Elena tenany kosa dia nankany Vienne [aloha], izay nandreseny fifaninanana lehibe vitsivitsy…
Taterin'i Sukhumi ihany koa ny tafatafa iray tao amin'ny fahitalavitra Rosiana nifanaovana tamin'i Dmitry Rogozin, lehiben'ny antoko Rodina avy amin'ny elatra havanana ary iray amin'ireo mpanao pôlitika maro mampifandray ny fifandirana Rosiana-Zeorziana ankehitriny aminà fifandonana mbola mitohy ao amin'ny faritra Zeorziana ao Abkhazia; mponina maro ao Abkhazia no avy amin'ny foko Rosiana, ary ny ankamaroan'ny Rosiana dia maniry ny hahita an'i Abkhazia ho lasa fanjakana mahaleo tena, na haraikitra anatin'i Rosia:
Nisy nanontany [i Rogozin] raha ”vonona ny handefa miaramila Rosiana ho faty, satria tsy hanaiky mihitsy ny fahaverezan'i Abkhazia i Zeorzia, ary azo antoka fa hanomboka izany ny ady”. Namaly i Rogozin fa vonona izy, tsy ny handefa miaramila ho faty monja, fa ny haka basy sy hirotsaka mivantana hamabo an'i Abkhazia ihany koa.
Mizara ny tantaranà zazalahy 13 taona iray voasaraka tamin'ny ray aman-dreniny, izay tao amin'ny fiaramanidina voalohany nitondra ireo mponina Zeorziana voaroaka i Sukhumi:
Noheveriko fa ireo fasista avy tao amin'ny SS Alemàna irery ihany no nanasaraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka, nanosika azy ireo tanaty fiarandalamby samy hafa…
Tao amin'ireo sehatra fanehoankevitra, noraisina ho miandany aminà lafy iray loatra i Sukhumi. Namaly izy:
Tsy tonga lafatra ny zavatra aty Zeorzia. Misy fitondrana jadona aty, fa tsy fasisma toy ny ao Rosia. Tsy mandroaka ireo Rosiana hiala aty izy ireo, tsy maheno filamatra toy ny ”Zeorzia ho an'ny Zeorziana” ianareo.
Miady hevitra momba ny haavon'ny fanavakavahana ao Rosia ny mpamaky iray:
Efa 14 taona izao no nipetrahako teto St. Petersburg, miaraka aminà anarana Zeorziana,
ary mbola tsy niharan'ny fankahalàna noho ny firazanako mihitsy aho.
Mamaly ny mpamaky iray hafa:
Efa 16 taona izao no niainako teto St. Petersburg, manana anarana Zeorziana aho, ary iharan'ny fankahalàna foana noho ny firazanako. Tsara vintana tokoa ianao.
Manolo-kevitra kosa anefa ny iray hafa hoe:
Miankina amin'ny endrika ivelany avokoa izany rehetra izany. Raha tsy miendrika Kaokaziana ianao, tsy maninona.